Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်)
Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lactulose သည် ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ဝမ်းနှုတ်ဆေးဖြစ်သည်။၎င်းသည် အူများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်များပြားစေသည်။ lactulose သည် ဝမ်းထဲတွင်ပါဝင်သော ရေပမာဏကို များစေခြင်းဖြင့် ဝမ်းကို ပျော့စေသည်။ ၎င်းသည် လူများဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော သကြားဖျော်ရည် တမျိုးဖြစ်ပါသည်။
အခြားအသုံးပြုမှုများ။ ။ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် အသုံးပြုပုံများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအညွှန်းတွင်မပါဝင်သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ညွန်းဆိုသော အသုံးပြုမှု အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ရောဂါအနေအထား အတွက် lactulose ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
lactulose ကို အသည်းရောဂါကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက် lactulose ကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (အများအားဖြင့် တနေ့လျှင် တကြိမ်) သောက်ရပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် lactulose ကို အရည်အဖြစ်သောက်ပါက အရသာပိုကောင်းစေရန် ၎င်းကို အသီးဖျော်ရည်၊ရေ၊နွားနို့ သို့မဟုတ် ရေခဲမုန့်ကဲ့သို့သော ခပ်ပျော့ပျော့ အချိုစာများနှင့် ရောနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် lactulose ကို အမှုန့်အဖြစ် သောက်ပါက ၎င်းအမှုန့်များကို ရေဖန်ခွက်တဝက် (၁၂၀ စီစီခန့်)ဖြင့် ရောပါ သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ပါ။
ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆေးပမာဏ အနည်အများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။
လိုအပ်သော အူလှုပ်ရှားမှု ရလာစေရန်အတွက် ၄၈နာရီခန့် အချိန်ကြာတတ်ပါသည်။ အခြေအနေပိုဆိုးလာလျှင် သို့မဟုတ် မသက်သာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lactulose ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Lactulose ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Lactulose ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Lactulose ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Lactulose ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Lactulose ကို မသောက်သုံးမီ
-Lactulose သို့မဟုတ် အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
antacids, neomycin (mycifradin) ကဲ့သို့သော ပဋိဇီဝဆေးများ နှင့် အခြားသော ဝမ်းနှုတ်ဆေးများ။
-အကယ်၍ သင့်တွင်ဆီးချိုရှိလျှင် သို့မဟုတ် အခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ lactose ပမာဏအနည်းငယ်သာ စားရမည်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
-ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (အထူးသဖြင့် လ အတော်ရင့်နေလျှင်)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
-သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက Lactulose သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်စွာ ဝမ်းလျှောလျှင် lactulose သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lactulose ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Lactulose က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lactulose ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
-အကြောင်းရင်း ထူးထူးခြားခြားမရှိဘဲ စအိုမှ သွေးယိုခြင်း —-> ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းကုသရန်လိုအပ်ပါသည်။
-အူဖြတ်ပြီး ဝမ်းသွားရန် ဗိုက်တွင် အပေါက်ဖောက်ထားရခြင်း။
-အူသိမ်ဖောက်ထားခြင်း —-> ဤအခြေအနေမျိုးတွင် ဝမ်းနှုတ်ဆေးအသုံးပြုပါက အခြားပြဿနာများကိုပါ ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
-ဆီးချို အမျိုးအစား အမှတ်(၂) —-> အချို့ဝမ်းနှုတ်ဆေးများသည် dextrose, galactose, sucrose စသည့် သကြားအမျိုးမျိုးပါဝင်တတ်သဖြင့် ဆီးချိုသမားများအနေနှင့် သတိထားရမည်။
-သွေးတိုးရောဂါ —-> အချို့ ဝမ်းနှုတ်ဆေးများသည် သွေးတိုးရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော ဆိုဒီယမ်ဓါတ်ပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။
-ကျောက်ကပ်ရောဂါ ——>ကျောက်ကပ်မကောင်းလျှင် အချို့ ဝမ်းနှုတ်ဆေးများတွင် ပါဝင်သော မဂ္ဂနီဆီယမ် နှင့် ပိုတက်ဆီယမ် ဓါတ်များသည် ခန္တာကိုယ်ထဲတွင်စုပုံလာက ဆိုးရွားသော နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
-အစာ/ရေမြိုရခက်ခြင်း —–> ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသော mineral oil များသည် အဆုတ်ထဲမတော်တဆဝင်ကာ နျူမိုးနီးယား ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ထို့အပြင် အစာလုံးဖြစ်စေသော ဝမ်းနှုတ်ဆေးများသည် အစာမြိုရခက်သော လူနာများတွင် အစာရေမြိုအဂါၤ၌ တစ်နေတတ်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
-၁၅ စီစီကို တနေ့လျှင် တကြိမ် သောက်ရမည်။
-ကနဦးဆေးပမာဏ : ၁၅ စီစီကို တနေ့လျှင် တကြိမ် သောက်ရမည်။
အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်ဖြစ်သည်အထိ ဆက်သောက်ရပါမည်။
-ကနဦးဆေးပမာဏ : ၃၀ စီစီ ကို တနေ့လျှင် ၃ကြိမ်သောက်ရမည်။ သို့မဟုတ် ၃၀၀ စီစီကို ရေ သို့မဟုတ် normal saline ၇၀၀စီစီနှင့်ရောပြီး ဝမ်းချူဆေးအဖြစ် စအိုထဲထည့်ပြီး နာရီဝက်မှ တနာရီခန့်ထားထားရမည် (၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတကြိမ် ပြုလုပ်ပေးရမည်)။
-ဆက်လက်ပေးရမည့် ပမာဏ : ၃၀ – ၄၅ စီစီကို တနေ့လျှင် ၃ကြိမ်သောက်ရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
-ကလေးငယ်များ : တနေ့လျှင် စုစုပေါင်း ဆေးပမာဏ ၁.၇ – ၆.၇ ဂရမ် (၂.၅ – ၁၀ စီစီ) ကို သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် လေးကြိမ်ခွဲပေးရမည်။ တနေ့လျှင် ဝမ်းပျော့ပျော့ ၂ကြိမ်၊၃ကြိမ် ခန့်သွားစေရန် ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆပြီးပေးရမည်။
-ကလေးများ : တနေ့လျှင် စုစုပေါင်း ဆေးပမာဏ ၂၆.၇ – ၆၀ ဂရမ် (၄၀ – ၉၀ စီစီ) ကို သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် လေးကြိမ်ခွဲပေးရမည်။ တနေ့လျှင် ဝမ်းပျော့ပျော့ ၂ကြိမ်၊၃ကြိမ် ခန့်သွားစေရန် ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆပြီးပေးရမည်။
-ကလေးများ :စုစုပေါင်း ဆေးပမာဏ 0.7 –2g/kg/day (1 –3ml/kg/day) ကို သောက်ဆေးအဖြစ် သင့်တော်သလို အကြိမ်ခွဲပေးနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လူကြီးများတွင် ပေးရမည့် အများဆုံးပမာဏဖြစ်သော တနေ့လျှင် ၄၀ မီလီဂရမ် (တနေ့လျှင် ၆၀စီစီ) ထက် မကျော်လွန်စေရပါ။
Lactulose (လက်ကျူးလိုစ့်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
သောက်ဆေးရည် :10g lactulose/15ml
Lactulose ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Lactulose| Side Effects, Dosage, Uses & More.
http://www.healthline.com/drugs/lactulose/oral-solution#Highlights1. Accessed June 26, 2016.